आयो मेगा सरप्राइज ! मेगा बैंकले दिने भयो ९.४५% बोनस, मेगाका लगानीकर्तालाई थोरै भएपनि राहत !
ARCHIVE, MARKET WATCH » आयो मेगा सरप्राइज ! मेगा बैंकले दिने भयो ९.४५% बोनस, मेगाका लगानीकर्तालाई थोरै भएपनि राहत !
काठमडौं - मेगा बैंकले ९.४५% बोनस सेयर दिने भएको छ । बैंकले हालै बिक्री गरेको ६५% हकप्रद सेयरपछि कायम हुने चुक्ता पुँजी ७ अर्ब ३७ करोड ६७ लाख ४२ हजार ५२० रुपैयाँको ९.४५% बोनस दिने घोषणा गरेको हो । बैंकले बोनसमा लाग्ने कर तिर्न नगद लाभांश भने दिएको छैन । कर तिर्ने झन्झट भने लगानीकर्तालाई पर्ने भएको छ ।
बोनस सेयरपछि मेगाको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ७ करोड ३८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । मेगाले हालैमात्र विशेष साधारण सभा गरी टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकलाई एक्वायर गर्ने विशेष प्रस्ताव पनि पारित गरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंकले ८ करोड ११ लाख ९२ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ ।